China Silicone Kupeta Makapu fekitori uye vagadziri | SJJ
Wakambofungidzira kuva nekapu yakachena uye ine hutano yekunwa zviri nyore paunenge uchifamba musasa, musasa, parwendo rwebhizinesi, uchifamba panze nemhuri dzako kana shamwari? Ikozvino kupeta uye kutakurika Silicone Makapu uye Mabhodhoro zvinoita izvi zvive zvechokwadi. Iyo silicone makapu uye mabhodhoro anoitwa mu sma ...
Wakambofungidzira kuva nekapu yakachena uye ine hutano yekunwa zviri nyore paunenge uchifamba musasa, musasa, parwendo rwebhizinesi, uchifamba panze nemhuri dzako kana shamwari? Ikozvino kupeta uye kutakurika Silicone Makapu uye Mabhodhoro zvinoita izvi zvive zvechokwadi. Iyo mikombe yesilicone uye mabhodhoro anogadzirwa mudiki diki nemhando dzese dzekubatanidza senge tambo, tambo, makiyi makiyi, makiyi macheni, hoko uye vamwe, zviri nyore kuisa mumasaga ako kana muhomwe zvakare. Chikafu chegiredhi resilicone chakachengeteka, makapu esilicone nemabhodhoro zvakapetwa nekuiswa mumabhegi ako kana muhomwe kuti uchengetedze chikamu chemukati chakachena uye chine hutano. Iwo magadzirirwo anogona kuve akasiyana maumbirwo uye hukuru, marogo akasiyana uye mavara anoita iwo silicone makapu uye mabhodhoro anodakadza, anoyevedza uye anoyevedza. Izvo zviri nyore uye zvinoshamisa kushandisa iyo mikombe yesilicone uye mabhodhoro zvisinei kuti kunze kana mukati. Iyo silicone makapu uye mabhodhoro zvishandiso zvehupenyu hwako hwezuva nezuva uye zvakare zvakanakisa zvinhu zvekusimudzira, bhizinesi, zvipo, zviyeuchidzo uye zvichingodaro.
Zvishandiso: Chikafu giredhi Silicone zvinhu (BRA uye Phthalate yemahara)
Dhizaini uye saizi: 2D kana 3D, Mahara muforoma muripo kune edu aripo magadzirirwo,
Kusungirirwa: Tambo, Tambo, mhete dzekiyi, makiyi macheni, hoko kana kutevedzera mutengi
MOQ: 200 pcs kana kuiswa pasi pechisungo
Pashure: Silicone Tambo
Zvadaro: Silicone Kicheni Zvinhu
Mvura bhodhoro rinobata lanyards
Red Wine Bhodhoro Kuvhura Corkscrew
Sunga Bhawa / Sunga Clip / Sunga Slide